ရေဘဝဲတွင် မျက်လုံး ၂လုံးနှင့် စုပ်ခွက်များ ပါဝင်သော လက်ချောင်း ၄စုံ ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် မာသော နှုတ်သီးရှိပြီး ပါးစပ်သည် လက်တံများ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိသည်။ ရေဘဝဲအများစု၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းအပြင်တို့တွင် နံရိုးများ မရှိကြပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျဉ်းမြောင်း ...
ရေလက်ဝါးကောင်ကို မြောက်နှင့်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းများ အနီးရှိ သမုဒ္ဒရာများမှလွဲ၍ သမုဒ္ဒရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့နိုင် သည်။ ရေလက်ဝါးကောင်သည် အမြင်တွင် ထူးခြားပုံရသော် လည်း တိရစ္ဆာန် လောက၌ ရှေးအကျဆုံး အုပ်စုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သည်။ ရေလက်ဝါးကောင်သည် ငါးမဟုတ်ချေ။ ...
ရွှေငါး ဟူသည်မှာ အသွေးအရောင်လှပသည့် ယဉ်ပြီးဖြစ်သော အိမ်မွေးငါးငယ်ကလေးများ ဖြစ်သည်။ ငါးမွေးကန်ထဲ၌ ရွှေရောင်တလက်လက်နှင့် လူးလာပျော်ပါး ကူးခတ်သွားလာနေသော ရွှေငါးကလေးတို့သည် ကရပ်စီးယပ်ဩရတပ် ငသိုင်းတစ်မျိုးမှ ပေါက်ပွားလာကြောင်းကိုမူ လူတိုင်းမသိကြချေ။ ...
အတောင်ရှိသောပန်းများ၊ ပျံတတ်သော ပိုးကောင်များအနက် လိပ်ပြာနှင့် ပိုးဖလံတို့၏ ဇီဝစက်လည်ပုံသည် အလွန်အံ့ဩ စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့၏ အံ့ဩဖွယ်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပိုးကောင်များတွင် လိပ်ပြာနှင့် ပိုးဖလံများလည်း ပါဝင်၏။ အချို့ကဗျာဆရာမျာ ...
ဝင်ကစွပ် ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် နေထိုင်သော ဂဏန်းငယ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ခရုခွံအဟောင်းများထဲတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်တတ်သဖြင့် ဝင်ကစွပ် ဟု ခေါ်ကြသည်။​ ထားဝယ်အရပ်တွင် ပန်လည်ပန်စွပ် ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ခရုအခွံကို စွပ်ထားသည့်အတိုင်းပင် သွားလာတတ်သဖြင့် ရုတ် ...
ဝမ်းပြားကောင် က အူမပါတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပြီး ကျောက်တုံးထူတဲ့ ရေတိမ်မှာနေကြသည်။ ၎င်းရဲ့ အရေပြားမှာပါတဲ့ နေစွမ်းအင်သုံး အစာချက်ဖြစ်စဉ် ကိုအသုံးပြုတဲ့ ရေမှော်ပင်တွေက အစာအာဟာရကို ထုတ်ပေးကြသည်။ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ acorn worm ကောင်က ၎င်းရဲ့ ချောမွေ့တဲ့ နှာခ ...
ရေချိုကန်များတွင် ဟိုင်ဒြာကောင်များကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဆဲလ်မြောက်မြားစွာ ရှိသော တိရစ္ဆာန် များအနက် ဟိုင်ဒြာကောင်သည် အရှင်းဆုံး တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး ဖြစ်လေသည်။ အပ်ချုပ်စက်တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြသော ချည်များတွင် ချည်လုံးကြီးကြီး အရွယ်ရှိသော ကိုယ်လုံးကို ...
အစ်ကနျူမန်နကျယ်သည် ပျား၊ ပုရွက်ဆိတ်နှင့် နကျယ်တို့ပါဝင်သည့် ဟိုင်မင်နော့တာရာ မျိုးစဉ်ဝင် အင်းဆက်ပိုးမျိုးဖြစ်၍ အစ်ကနျူမန်နီဒီးမျိုးရင်း၌ ပါဝင်သည်။ ပျားများ၊ နကျယ်များကဲ့သို့ပင် အမြှေးပါးအတောင် လေးခုရှိသည်။ အစ်ကနျူမန်နကျယ်များသည် အရွယ်အစားစား ရှိက ...
အမ်မိုနိုက်သည် ပင်လယ်ခရုတစ်မျိုးဖြစ် သည်။ ယင်းသည် မိုလပ်စကာမျိုးပေါင်းစု၊ စီဖလိုပိုဒါမျိုးပေါင်း တွင် အမ်မိုနွိုင်ဒီးယမျိုးစဉ်၌ပါဝင်သည်။ ပက်ကျိနှင့်လည်း ဆင်ဆင်တူသည်။ ပစိဖိတ်နှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာများထဲ၌ တွေ့ရှိရ သော နော့တိလပ်ခေါ် ပင်လယ်ခရုမျိုးနှင ...
တောင်ငုံးရင်မည်း သည် အရွယ်အစား အလယ်အလတ် ရှိသော မြေလူးငှက် ဖြစ်သည်။ မလေးကျွန်းဆွယ်၌ သားပေါက်သော်လည်း၊ ကောင်ရေအများစုမှ မြန်မာပြည်မှ ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အပျော်တမ်း ငှက်ပညာရှင် ဂျွန် ဟင်နရီ ဂါးနီး ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Gurneys pi ...
နဖားကြူးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ငှက်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာများ နည်းပါးလာမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဦးခေါင်း၊ အမြီးဖျားနှင့် တောင်ပံဖျားတို့ အမည်းရောင်ဖြစ်၍ ကျန်တစ်ကိုယ်လုံး မီးခိုးရောင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ တွေ့ရသော ကျေးငှက်များတွင် မျိုးတူမျိုးကွဲအားဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ထားသော ငှက်မျိုးမှာ ၁,၂၄ဝ ခန့်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် ငှက်မျိုး ၂ဝဝ ခန့်သည် ဆောင်းရာသီတွင်မှ ရောက်လာတတ်သည့် ဧည့်သည်ငှက်မျိုးဖြစ်၍၊ ကျန်ငှက်များကား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ...
ဗျိုင်းအောက် Chinese Pond eron Ardeola bacchus p ဗျိုင်းအောက် Indian Pond Heron Ardeola grayii p ငဟစ် Purple Heron Ardea purpurea R P လင်းဝက်Night Heron nycticorax R p ငဟစ်မွဲ Grey Heron Ardea cinerea M P
Microsoft Windows NT နှင့် Windows 2000 တို့တွင်ရှိသော ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သည့် အရင်းအမြစ်များကို အရာဝတ္ထု တစ်ခုက ဆက်သွယ်ပေးနိုင်သော စာရင်း။ ii သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာများ၏ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်များကို ဖွင့်ယူခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြေအနေ ...
ကွန်ပျူတာများသည် တယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြင့် အဆက်အသွယ်ပြုရာတွင် အချက်အလက်များကို မတူညီသည့် အမြန်နှုန်းများဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးကြသည်။ ယင်းအမြန်နှုန်းကို bits per second ဖြင့် တိုင်းတာ သုံးစွဲကြသည်ကများသည်။ Bit တစ်ခုသည် ကွန်ပျူတာက အဆင့်ဆင့်အသုံးချ ဆောင်ရ ...
ကွန်ပျူတာထဲရှိ bus ကို ထိန်းချုပ်သော device ဖြစ်သည်။ သာမန်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် processor က လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် စွမ်းရည်မြင့် ကွန်ပျူတာများတွင် video adapter သို့မဟုတ် disk controller တို့သည် main memory ဖြင့် data လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲပေး ...
Cross-platform သို့မဟုတ် multi-platform သည် computer porgrams များသည် မည်သည့် operating systems တွင်မဆို မည်သည့် computer languages တွင်မဆို မည်သည့် programming languages တွင်မဆို သို့မဟုတ် multiple computer platfrom တွင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင် ...
စက်မောင်းစနစ်, OS, သည် ကွန်ပျူတာတွင် software အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ကွန်ပျူတာ ရင်းမြစ် များကို တာဝန်ခံရန် တာဝန်ရှိသည်။ စက်မောင်းစနစ် တွင် application များကို ထိန်းသိမ်းပြီး စက်ကို မောင်းနှင်သည်။ စက်မောင်းစနစ်သည် hardware များ၏ ...
ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တို့တွင် တွင် စာလုံး ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် grapheme၊ grapheme-like unit ခေါ် သဘာဝ ဘာသာစကား များတွင် အက္ခရာ သို့မဟုတ် syllabary အဖြစ်ရှိသော သင်္ကေတ များဖြစ်ကြသည်။ စာလုံး၏ ဥပမာ များမှာ ...
ဂူဂယ် ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်တွင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးနှင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာလုပ်ငန်းများကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နေသော အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ တည်နေရာမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Mountain ...
Cisco သည် ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက် ချိတ်ဆက် ခြင်းနှင်. ဆက်သွယ်ရေးအသုံးချသိပ္ပံပညာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော အမေရိကန် နိုင်ငံစုံ ကွန်ပျူတာကွန်ရက် ချိတ်ဆက် ခြင်း နည်းပညာ ကော်ပိုရေးရှင်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တွင် ရုံးချုပ်တ ...
ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် သည် ယခုအချိန်တွင် အော်ရကယ် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် သည် ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ရောင်းချခြင်းနှင့် IT ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသော အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ I ...
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ရက်မွန်တွင် ရုံးချုပ်တည်ကာ ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲလ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ တကိုယ်ရေးသုံးကွန်ပျူတာ နှင့် အခြား နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကို ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချ၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖ ...
လင့်ခ်စစ် သည် အိမ်သုံးနှင့် ရုံးသုံး ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက် များတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စစ်စကို စစ်စတမ် မှ ဝယ်ယူပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
အေအဲမ်ဒီ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ စဲန်တာကလဲရာ တွင် အဓိက အခြေစိုက်ထားသော အခြားနိုင်ငံအချို့တွင်လည်း ရုံးစိုက်ထားသည့် တပိုင်းလျှပ်ကူး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် တစ်ဦးချင်းသုံး ဈေးကွက်နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာပရိ ...
ဂရပ်ဖစ်ဖလှယ်မှုပုံစံ သည် လမ်းပြမြေပုံပုံရိပ်ပုံစံဖြစ်ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်စတိဗ်ဝီဟိုက်ဦး ဆောင်သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူCompuServeတွင်အဖွဲ့မှတီထွင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာများနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်များအကြား ...
OSI မော်ဒယ် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကွန်ပြူတာ ဒီဇိုင်းအတွက် ရည်ညွှန်းကိုးကား ပြုကြသော Open System Interconnection Reference Model ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ OSI Reference Model သို့မဟုတ် OSI လွှာ မော်ဒယ်လ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းကြသည်။ စနစ်အချင် ...
တွက်ချက်ခြင်း၏ client server နမူနာပုံစံသည် အသုံးပြုခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ server များဟုခေါ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်တစ်ခု၏ပေးသူများနှင့် ဝန်ဆောင် မှုတောင်းဆိုသူများဖြစ်သည့် ကို client များအကြား ဝတ္တရားများပိုင်းခြားခြင်း သို့ ...
ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက်များတွင် ကြားခံဆာဗာ ဆိုသည်မှာ ဆာဗာ ဖြစ်ပြီး အခြားဆာဗာများ ထံမှ အရင်းမြစ်များကို ရှာဖွေ ရန် သုံးစွဲသူများ ၏ တောင်းဆိုမှုများ အတွက် ကြားခံအနေနှင့် အသုံး ပြုသည်။ သုံးစွဲသူ မှ ကြားခံဆာဗာ တစ်ခုသို့ ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော - ဖိုင်တစ်ခု၊ ...
ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကွန်ယက်ဟုသာ အလွယ်တကူ ခေါ်ဆိုလေ့ ရှိကြပြီး ကွန်ပျူတာနှင့် အခြား အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများကို ဆက်သွယ်ရေး ချန်နယ်များဖြင့် တွဲဆက်ထားခြင်းကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်များသည် အသုံးပြုသူများအား ဆက်သွယ်ရာတွင် လွ ...
ကွန်ပျူတာကွန်ယက် သို့မဟုတ် ဒေတာ ကွန်ယက် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ အချင်းချင်း အချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ဖလှယ်နိုင်သည် အဝေး ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်တွင် ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာ များက ကွန်ယက် ဆက်ကြောင်း တွင် အချက်အလက်မျ ...
စီအက်စ်အမ်အေ ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသော နည်းလမ်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ အပေါ်တွင် အခြေခံ ဖန်တီးထားပြီး ကွန်ယက်ကြိုး အစရှိသည့် ကြားခံနယ်ကို ရယူသုံးစွဲသည့် နည်းလမ်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စီအက်စ်အမ်အေ၏ အင် ...
ပုံရိပ် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက် တစ်ခုသည် ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကဲ့သို့သော အဝေးထိန်းရုံးခန်းများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းသို့ လုံခြုံသောကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်းကိုပေးရန် လူထုအဝေးဆက်သွယ်ရေး အဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြ ...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွှာ သည် ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော OSI မော်ဒယ်လ် တွင် ပထမဆုံး နှင့် အနိမ့်ဆုံးအလွှာဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွှာတွင် ကွန်ယက်၏ အခြေခံ ဟတ်ဒ်ဝဲလ်များ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ဆိုင်သော နည်းပညာများ ပါဝင်သ ...
အင်တာနက် ပရိုတိုကော လိပ်စာ နံပါတ်နှင့် အညွှန်းတပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ရက် တွင်း ဆုံမှတ်တို့ အကြား ဆက်သွယ်မှုအတွက် သုံးသော အင်တာနက် ပရိုတိုကော ကို အသုံး ပြု သည့် ကွန်ပျူတာကွန်ရက် တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည့် မည်သည့် စက်ပစ္စည်းကို မဆို ပေးဆို သော နံပါတ် သတ်မှတ ...
အလိုဟာ ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်စနစ် များတွင် အစောဆုံး အသုံးပြုခဲ့သော နည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဟာဝိုင်ယီ တက္ကသိုလ် မှ တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အလိုဟာ နည်းလမ်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင် အသက်ဝင်ခဲ့ပြီး ပထမဆ ...
အိုအက်စ်ပီအက်ဖ် သို့ အတိုဆုံးလမ်းအား အရင်ဖွင့် ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် ကွန်ယက် အနေအထားပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သော အိုင်ပီ ကွန်ယက်များတွင် သုံးသည့် ရောက်တင်း ပရိုတိုကောလ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုပရိုတိုကောလ်သည် ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေ အယ်လ်ဂေါ်ရစ်သမ် ကိ ...
အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်း တွက်ချက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ခြင်း သည် ဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်သော အသုံးပြုခြင်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အုပ်စုတူအဆင့်တူ များအကြား တာဝန်ဝတ္တရားများ သို့မဟုတ် အလုပ်ပမာဏခွဲဝေပိုင်းခြားခြင်းကို ပြုလုပ်သည်။ အသုံးပြုသူ ...
ဂျိုးဆက်ဝေဇမ်ဘောင်း အား ၁၉၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်တွင် ဘာလင်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။သူသည် ဂျာမန် အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင်ရှိသော ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမှ ပရော်ဖက်ဆာနှင့် စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူသည် ဂျူးမိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ ...
မက်တာဒေတာ သည် အချက်အလက် သို့မဟုတ် ဒေတာ တို့၏ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြသော ဒေတာ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားတွင် "data about data"ဟု အတိုချုပ် ပြောနိုင်ပြီး၊ "အချက်အလက်တို့၏ အကြောင်းကို ဖေါ်ပြချက်"ဟု အနီးဆုံး ဘာသာပြန်နိုင်သည်။ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြမှုဆိုင်ရ ...
ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ၊ ကြီးမားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲများကို များသောအားဖြင့် နံပါတ် အက္ခရာကုဒ်များအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၊ ...
ရီပိုစစ်တရီ ဆိုသည်မှာ ခြုံငုံပြီးပြောလျှင် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဝေါဟာရတွင် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပေးသောနေရာဖြစ်သည်။ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ဆိုင်ရာ ရီပိုစစ်တရီတစ်ခုတွင် ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အဓိကသိမ်းဆည်းပေးသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆ ...
Kali Linux ဆိုသည်မှာ Penetration Testing နှင့် လုံခြုံရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Linux ပုံစံမူကွဲ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအား Offensive Security Ltd မှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Mati Aharoni, Devon Kearns နှင့် Raphael Hertzog တို့သည် အဓိက ဒီပလော်ပါများဖြစ်ကြသည်။
Solaris ဆိုသည်မှာ Unix ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Sun Microsystems မှ developed လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Oracle Corporation မှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် Solaris ဟုအမည်ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ယင်းသည် များသောအားဖြင့် SPARC စနစ်များအား ထောက်ပံ့ထားပြီး Or ...
ဗီအိတ်ဇ်ဝါ့ခ် သည် အချိန်နှင့် တပြေးညီ လှုပ်ရှားထိန်းချုပ်နိုင်သော စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အလာမီဒါရှိ ဝင်းရေးဗား စစ်စတမ် မှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည်။ အင်တဲလ် ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဝင်းရေးဗား စစ်စတမ်အား ...
လင်းနပ်စ် ဆိုသည်မှာ ယူးနစ်စ် နှင့် ဆင်တူသော ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး လင်းနပ်စ် ကာနဲလ် ကို အသုံးပြုထားသည်။ လင်းနပ်စ်ကို ကွန်ပျူတာ ဟတ်ဒ်ဝဲလ် အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက် ကွန်ပျူတာများ ...
အန်းဒရွိုင့် သည် လင်းနပ်စ် ကာနဲလ် ကိုအခြေခံမွန်းမံထားသော မိုဘိုင်းလ် ပစ္စည်းများအတွက် စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ဖြစ်ပြီး ဂူဂယ်လ်Google ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Android Inc. အား အောက်တိုဘာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အန်ဒီရူဘင် မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် And ...
programming language များလည်း သဒ္ဒါဆိုတာ ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပရိုဂရမ်၏ အမိန့်စာကြောင်းများကို ရေးသားရာတွင် စည်းစနစ်မှန်ကန်မှု အဓိကလိုအပ်ပါသည်။ မိမိရေးသားသော ပရိုဂရမ်တွင် စဉ်းစားတွက်ချက်နည်းစနစ်မှန်ကန်သော်လည်း မိမိအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်၏ သဒ္ဒါစည်းစန ...
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာတွင် ရင်းမြစ်ကုဒ် သည် ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား တစ်ခုတွင် အသုံးပြုသော စာကြောင်း သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတ္တိအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် အစဉ်များဖြစ်ပြီး လူဖတ်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား တစ်ခုခုဖြင့်ရေးသားထားသည်။ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား တ ...
Object Oriented ဆိုသည်မှာ ပုံဆောင်ဝတ္တုအချင်းချင်း ပူးပေါင်း၍ စစ္စတမ်တစ်ခု၏ တာဝန်များထမ်းဆောင်စေရန် စဉ်းစားခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ စစ္စတမ်အတွင်းတွင် အသုံးပြုသော အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အုပ်စုဖွဲ့ကာ ပုံဆောင်ရုပ်ဝတ္တု တစ်ခုအနေဖြင့် က ...
စီးပွားရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ နိုဘယ်အထိမ ..